विद्यालय नपठाउनेको सुविधा रोक्का | विद्यालय नपठाउनेको सुविधा रोक्का – हिपमत
विद्यालय नपठाउनेको सुविधा रोक्का
हिपमत डटकम (मोरङ),९ माघ, मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा न. ६ ले स्कुल नजाने बालबालीकालाइ र नपठाउने परिवारलाई कुनै पनि सुबिधा नदिने भएको छ ।
अध्यक्ष जयबहादुर तामाङका अनुसार सिमान्तकृत तथा पिछाडीएको समुदायका परिवारका बालबालीका विद्यालय पुगुन भन्ने उद्देश्यले सो वडाले आफ्ना बालबच्चा विद्यालय नपठाउनेलाई जन्मदर्ता, मृत्यु दर्ता , समाजिक सुरक्षा भत्ता, विभिन्न सिफारीसहरु नदिने भएको हो ।
तामाङले जाडोको मौसमका बेला स्थानीय वडाका मुसर समुदायलाई सैर्य चुलो, मिनि इन्भटर, दाउरा र सिरक, विद्यार्थीलाई न्यानो लुगा, पोसाक, प्रदान गर्दै आउनु भएको छ ।
जाडोमा तातो , सुत्केरीलाई भाले
अध्यक्ष तामाङले सुत्केरीलाई लोकल कुखुराको भाले उपाहार दिनभएका छन । सो वडामा पुस महिना भित्र सुत्केरी भएका मिान्तकृत समुदायका नवाजात शिशुका आमा(सुत्केरी) हरुलाई भाले उपाहार दिनईन लागिएको हो । अध्यक्ष तामाङले भने,‘ चिसो मौसम भएकाले सिमान्त कृत समुदायका सुत्करीलाई भाले दिने तयारी गरिएको हो ,। विगत १५ वर्ष देखिनै समाजसेवा गर्दै आउनुभएका अध्यक्ष तामाङले जाडोका कारण स्कुल जानबाट बन्चित बिध्यार्थीहरुलाई न्यानो लुगा बितरण गर्नुभएको हो । चिसो बढे संगै मुसर समुदायमा रहेका बालबालिकाहरु परालको घुर ताप्ने स्कुल नजाने समस्या आए पछि तामाङले दाउरा र न्यानो लुगा वितरण गरेको स्थानीय भिम लिम्बुको भनाई छ । तामाङ मुसरको घर घरमा गई साना देखि ठुला सम्मका सबैलाई छानि छानि लुगा बितरण गर्नुभएको हो । तामाङले न्यानो महसुस गर्न आगो ताप्न दाउरा समेत वितरण गर्नुभयो । तामाङले आफ्नो वडामा मुसर समुदाय रहेको र जाडोमा समस्या हुने भएकाले बर्षभरी जाडोका कपडा संकलन गरी प्रत्येक बर्ष बितरण गर्दै आउनुभएको छ । रासस(गोपालप्रसाद पोखरेल)
नोट फोटो पनि पठाएको छु ।विद्यालय नपठाउनेको सुविधा रोक्का
(गोपाल प्रसाद पोखरेल) पथरी (मोरङ),१९ मोरङ ः मोरङको पथरी शनिश्चरे नगरपालिका वडा न. ६ ले स्कुल नजाने बालबालीकालाइ र नपठाउने परिवारलाई कुनै पनि सुबिधा नदिने भएको छ ।
अध्यक्ष तामाङले सुत्केरीलाई लोकल कुखुराको भाले उपाहार दिनभएका छन । सो वडामा पुस महिना भित्र सुत्केरी भएका मिान्तकृत समुदायका नवाजात शिशुका आमा(सुत्केरी) हरुलाई भाले उपाहार दिनईन लागिएको हो । अध्यक्ष तामाङले भने,‘ चिसो मौसम भएकाले सिमान्त कृत समुदायका सुत्करीलाई भाले दिने तयारी गरिएको हो ,। विगत १५ वर्ष देखिनै समाजसेवा गर्दै आउनुभएका अध्यक्ष तामाङले जाडोका कारण स्कुल जानबाट बन्चित बिध्यार्थीहरुलाई न्यानो लुगा बितरण गर्नुभएको हो । चिसो बढे संगै मुसर समुदायमा रहेका बालबालिकाहरु परालको घुर ताप्ने स्कुल नजाने समस्या आए पछि तामाङले दाउरा र न्यानो लुगा वितरण गरेको स्थानीय भिम लिम्बुको भनाई छ । तामाङ मुसरको घर घरमा गई साना देखि ठुला सम्मका सबैलाई छानि छानि लुगा बितरण गर्नुभएको हो । तामाङले न्यानो महसुस गर्न आगो ताप्न दाउरा समेत वितरण गर्नुभयो । तामाङले आफ्नो वडामा मुसर समुदाय रहेको र जाडोमा समस्या हुने भएकाले बर्षभरी जाडोका कपडा संकलन गरी प्रत्येक बर्ष बितरण गर्दै आउनुभएको छ ।